Ny famadihana ahy voalohany – Contos de Sacanagem
← Pengkhianatan pertama saya
Safada da Sexta-feira →
Ny famadihana ahy voalohany
Taorian’ny volana fahenina ambin’ny folo dia nanomboka nilamina ny fifandraisako tamin’i Marcio.
Tsapany fa te hanambady izy ary te hanofa trano honenana.
Nolazaiko izy fa hanohy hipetraka ao amin’ny efitranoko, afaka miaraka manao firaisana toa antsika izahay.
Tsy te hiditra amin’ity fampakaram-bady ity aho satria mbola tanora. Te hiala sasatra amin’ny fanambadiana aho.
Tsy nisy lalana, tsy nisy nanala ny sain’i Marcio tamin’ny tantaram-panambadiana.
Mandra-pahatongan’ny sabotsy iray dia nitady trano hipetrahana izahay, namboarinay ny trano, tao amin’ny trano fonenanay rehefa tonga izahay, dia niresaka taminy indray aho fa tsy te hanambady, ary hipetraka irery izy.
Nandany ny herinandro aho nefa tsy nanao firaisana tamin’i Marcio. Nihanika ny rindrin’ny akoho teo am-bavany sy ny pussy izy.
Nody izahay ny sabotsy mba hijery fanaka. Nandeha an-tongotra afovoany izahay, mandra-pahitanay fivarotana mahafinaritra misy fanaka samy hafa.
Tonga tao amin’ny magazay izahay, nisy zazalahy tena tsara tarehy sy lehilahy iray nanangona fanaka vitsivitsy, ary lehilahy iray hafa 40 ka hatramin’ny 45 taona na mahery.
Tonga mamaly anay ilay zazalahy tena mahalala fomba, nampiseho ny fanaka ary izaho manokana, tsy nanisy fiheverana ireo fanaka isaky ny minitra, ny zazalahy ihany, io no nangatahany finday an’i Márcio hahafahany miantso rehefa tonga ny sofa iray izay tsy manana loko tianay izany.
Nomeko an’ilay zazalahy ilay izy nony farany. Nanaiky tamin’ny fanomezana karatra fivarotana niaraka tamin’ny nomeraony sy ny anarany izy. Niantso an’i Cesar izy.
Rehefa nandeha ny andro dia nieritreritra momba an’i Cesar foana aho.
Nandeha tamin’ny andro fisakafoanana aho indray andro dia nankany amin’ny magazay hijery an’i Cesar, miaraka amin’ny fialantsiny raha tonga ny sofa.
Nanontaniako raha tonga ny sofa. Nilaza i Cesar fa tsy tonga ary handany andro vitsivitsy.
Niaraka tamin’ny sakaizany tao amin’ny fivarotana i Kaisary ary azoko antoka fa tsapan’ny namany fa niaraka tamin’i Kaisara aho.
Nanontany ilay zazalahy hoe maninona no heveriko fa tsara raha tonga ny sofa.
Novaliako fa tsy ao amin’ny toe-tsaina hanambady intsony aho, fa ao anatin’ny toe-tsaina hisaraka amin’ny sipako.
Niverina nanompo aho tamin’ny farany.
Te hivoaka niaraka tamin’i Cesar aho fa azoko antoka fa tsy handray andraikitra hiantso ahy izy.
Ka nanapa-kevitra ny hiantso azy aho.
Niantso ny alakamisy aho ary nisakafo hariva tao amin’ny trano fisakafoanana mahafinaritra izay efa fantatro.
Tamin’ny andro voatondro, rehefa tonga ny fotoana handehanako, dia nankany amin’ny biraoko i Márcio mba hiara-mody. Nolazaiko azy fa afaka mandeha izy fa hijanona tara aho hamita ireo serivisy tara.
Tamin’ny fotoana voatondro nahatongavan’i Cesar, niantso ahy izy, nidina aho. Ary nankany amin’ny trano fisakafoanana izahay hisakafo hariva.
Nandritra ny sakafo hariva dia notantarain’i César ahy ny fiainany, notantaraiko azy ny momba ahy.
Rehefa vita ny sakafo hariva dia nitondra ahy ho any amin’ny tranoko aho, nijanona teny an-dalambe izahay niresaka tao anaty fiara.
Rehefa nanomboka nanoroka tao anaty fiara izahay dia efa noraisiko ny dick-ny, izay tena mafy tokoa, nijanona ela tao amin’ity crumple ity izahay, mandra-panaoko an’i Cesar hamoaka ny dick-ny. Noraisiko ny kontoliny ary nanomboka nanadala azy moramora aho rehefa nanoroka azy. Ny oroka nataony dia tsy ilay oroka nahatonga ahy hangovitra. Ny oroka tokana nahatonga ahy hangovitra dia indray mandeha nanoroka tovovavy iray aho, ny oroka nataony nampihorohoro ahy.
Tamin’izaho nangataka hitsentsitra ny diany, nanomboka nifoka ny diany aho, kely kokoa noho ny an’i Márcio ny dick-ny.
Nifoka 10 minitra teo ho eo i Cesar ary nifarana teo am-bavako.
Ny fihiranan’i César dia tsy mitovy amin’ny fihanaky Márcio.
Navelako hadio ny diakao, ary nanao veloma izahay. Ary nanao fandaharana izahay mba hihaona indray, izao ao amin’ny trano fandraisam-bahiny.